Shirkado la kashifay oo la sheegey iney sheekooyin been ah ka iibiyaan qaxooti - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nin kombiyuutar hor fadhiya iyo astaanka wakaaladda socdaalka. sawir: Emelie Rosén/Sveriges Radio samt Marcus Ericsson/TT
La cusbooneeyay tisdag 12 december 2017 kl 12.04
La daabacay tisdag 12 december 2017 kl 09.06
Waxaa jira shakhsiyaad u furtay shirkado sidii ey sheekooyin been abuur ah uga iibin lahaayeen qaxootiga si ey Sweden ugu heli lahaayeen sharci deggenaansho. Sidaas waxaa laga ogaaday baadhitaan ay laanta wararka Ekot arrimahan ka sameeysay.
Mid ka mid ah dadka shirkadahan lacag siiyay si uu sharci u helo ayaa ah nin lagu magacaabay Hamid.
-Markii diidmada la iga siiyay wakaaladda socdaalka ee Migrationsverket waxaan ka baqday in Iraan la igu celiyo. Dabeetana waxaan ogaaday in ay jiraan shirkado dadka ka caawiya sharciga deggenaansho. Waxay iga iibiyeen bogg internetka ka jira oo mucaarad ku ah dawladda Iraan, markaa waxeey iga caawiyeen in ay u eekeeysiiyaan in aan boggaas iska leeyahay si aan heeyada socdaalka aan ugu idhaahdo in aan waddankeeyga ku laaban karin, ayuu sheegay Hamid oo dabeetana toos sharcigii dalka ugu helay.
Shirkadaha qaabkan sharci darrada ku shaqeeysta kana faa´ideeysta baahida qaxootiga ayaa ka jira dhowr waddan. Ninkan oo aan ku magacawnay Jamshid ayaa u shaqeeya shirkad kale oo iyaguna qaxootiga ka iibiya sheekooyin been ah si ay sharci deggenaansho ugu helaan. Laba wax ayey shirkaddiisu ka caawisaa qaxootiga. In sheekooyin been abuur ah ka iibiyaan qaxootiga iyo habka beenta loo abuuro si fiise amba dal ku gal loo helo.
-Xitaa qaxootiga raba in loo sameeyo walaal been ah waan ka caawin karna. Wax kasta oo uu qofku u baahan yahay ama uu codsado annaga ayaa gacan siinna, lacag gaadhaysa 60.000 oo koroon ayaan ka qaadanaa qofkiiba. Isagoo hadalkiisii sii watana wuxuu sheegay:
-Boqolkiiba boqol qofku sharci wuu helayaa, sida uu sheegay Jamshid.
Baadhitaanka laanta wararka Ekot weli ma caddeeyn tirada sheekooyin ay shirkadahani ka iibiyeen qaxooti iyo inta sharci ku heshay. Hasayeeshe waxay ekot soo ogaatay sheekooyin saddex ah oo Sweden laga iibiyey. Sidoo kale qaxootiga sheekooyinkan been abuurka ah iibsada ayaa ka soo jeeda qowmiyado kala duwan, waa sida lagu ogaaday baadhitaanka Ekot.
Howl-wadeennada laanta wararka Ekot ayaa si gaar ah u eegey saddex shirkadood oo ku shaqeeysta ganacsiga beenta noocan oo kale. Sheekooyinka beenta ah waxeey ka iibiyaan dadka doonaya in ay sharci ka helaan waddammada Sweden, Mareeykanka, Ingiriiska iyo Jarmalka.